विश्व फुटबलका महान खेलाडी म्याराडोनाको अन्त्येष्टी निजी समारोहमा गरियो – नेपाली सूर्य
November 27, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on विश्व फुटबलका महान खेलाडी म्याराडोनाको अन्त्येष्टी निजी समारोहमा गरियो
काठमाडौं : विश्व फुटबलका महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको अन्त्येष्टी निजी समारोहमा गरिएको छ ।
फुटबल प्रशंसकबीच ‘भगवान’को उपमा पाएका म्याराडोनाको मृत्युको खबरले संसारभर उनको प्रशंसक दुः खी भएका छन् ।
संसारलाई रुवाएर बिदा भएका तिनै सर्वकालीक महान् फुटबलरको पार्थिव शरीर भने एक निजी समारोहकाबीच ब्युनस आयर्सको चिहान घरमा अन्त्येष्टी गरिएको छ ।
शान, मान र आलोचनाबाट उत्तिकै घेरिएका ६० वर्षीय म्याराडोनाको गत बुधबार हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो । उनको निधनको खबरलाई विश्वभर रहेका उनका फुटबल प्रशंसकहरु पत्याउन सकिरहेका छैनन् र शोकमा डुबेका छन् ।
अर्जेन्टिनी सरकारले देशभर तीन दिने राष्ट्रिय शोक नै घोषणा गरेको छ । बिहीबार भएको अन्त्येष्टीमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका साथि गरी करिब दुई दर्जन मानिस सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यद्यपि, उनको कफिन लैजादै गर्दा ठूलो संख्यामा उपस्थित भएका प्रशंसकहरुले अश्रुपूर्ण आँखाका साथ अन्तिम बिदाई गरेका थिए । आँशु चुहाउँदै अधिकांश प्रशंसकहरु म्याराडोनाको कफिनतर्फ चुम्बन गर्दै गरेका दृष्य देखिन्थे । मुलुकलाई विश्वकपको ताज पहिर्याउने राष्ट्रिय हिरो म्याराडोनाका निधनमा अर्जेन्टिनीहरु कल्पनै गर्न नसकिने शोकमा डुबेका छन् ।
म्याराडोनालाई अन्तिम बिदाई गर्न बाटोमा भेला भएका मानिसको भिड अत्याधिक हुँदा प्रहरीले अश्रु ग्यास र रबर बुलेट समेत प्रहार गर्नु परेको छ । राजधानीको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको बेला भिस्टा चिहान घरमा म्याराडोनाको पार्थिव शरीर गाडिएको छ । दुई हप्ताअघि मात्र मस्तिष्कमा रगत जमेपछि शल्यक्रिया गरिएका उनको अन्ततः घरमै रहेका बेला हृदयघातबाट निधन भएको हो ।
आफ्नै देशको बोका जुनियर, इटालीको नापोली र स्पेनको बार्सिलोनाबाट व्यवसायिक फुटबल खेलेका म्याराडोना आफ्नो खेल जीवनको उत्कर्षमा रहेकै बेला लागुपदार्थको कूलतमा फसेका थिए ।
११ बर्षमै यस्तो काम गरेर परिवार पाल्दै यी नानी, दिनको २०० कमाउछिन एक्लै बसेर रुन्छिन, यति सानो उमेरमा दुख र संघर्ष हेर्नैपर्ने (भिडियो)
अन्तर्वार्तामै भक्का’नीईन सपना, कुलमान घिसिङ देखि महाबिर पुनले दिए बधाई ! रु’दा रु’दा आँसु रित्तियो (भिडियो)
दलित समुदायलाई दूध बेच्ने रहर : तर छोइन्छ भन्छन्, नबिक्ने डर छ
अमृता र बिष्णुको अपराध ! प्रेमिसंग यौनसम्पर्क गरिरहेको श्रीमानले देखेपछी यस्तो गरेछन
October 17, 2021 Nepali Surya